किन तपाईंको हातले नलागेको हो?
चश्मा र कन्टेनरहरू द्वारा एक पेय डाँडाको संस्कृति यसको विविधतामा अमीर छ र, अरूको जस्तै, धेरै नग्नता छन् र पनि लाग्छ, जसका केही अझै पनि यो दिनको लागि कडा रूपमा देखिएका छन्। तथापि, धेरै थोरै व्यक्तिहरूले सम्झन्छन्, उदाहरणको लागि, किन तपाईं आफ्नो हातमार्फत बहस गर्न सक्नुहुन्न। संकेतका स्रोतहरू समयको गहिराईमा टाढा गएका छन्।
पुरातन समयमा, रिंगहरू एक प्रकारका मनोरञ्जनहरू थिए , जसको बन्द घडीको सम्राटले ब्रेक सेना र दुष्ट आत्माहरूको सुरक्षाको अर्थ राख्यो। पछि, गहना बहुमूल्य धातुहरूबाट सिक्न सिक्यो, जसको परिणामस्वरूप तिनीहरू सर्वोच्च सर्वोच्च प्राधिकारीको व्यक्तिको संकेतक बनेको, त्यसपछि - प्रस्ट व्यक्तिहरूको सर्कलमा। र अन्त्यमा तिनीहरूले स्थिति, सम्पत्ति, विशेष गुणहरूको पहिचानको चिन्ह बन्नुभयो।
भित्री इतिहास इतिहासले राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण वा कुञ्जीका हतियारहरू कसरी पोष्ट छोड्यो र बित्तिकै बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ। प्रायः तिनीहरूले भोजको समयमा खाने वा शराब सेवा गरेर ज्यान जोगाए, मध्य युगमा मुख्य पेयको रुपमा वितरण गरियो। सामान्यतया जहर हर समय रिंग देखि गिलास मा डाल दिए जब जहरीला आफ्नो हात मा रहन को लागि जारी राखयो, यसैले एक खराब ओजन पैदा भयो।
धेरै रौतहट र मृत्यु पछि, अन्ततः यो चश्मेलाई भर पर्दा मनाउन मनाईयो। यदि कसैलाई आफ्नो हातमा थोरै धकेल्छ भने जासूसहरूले सोध्थे किन किन, तर केवल एक व्यक्तिलाई पकड्यो वा कि त उनलाई पक्राउ गरियो वा त्यसलाई स्थानमा सीधा पार्छ।
आज, यो महत्व धेरै गायब भएको छ, प्राय: किन यो हात मार्फत असंभव छ असामान्य छ, केवल एक छोटो सुनेको छ: "यो एउटा चिन्ह हो।" जब व्याख्या धेरै भिन्न छ: त्यहाँ कम पैसा हुनेछ, एक सम्बन्धी बिरामी पाउनेछ, चीजहरू खराब हुँदै जान्छन् र। यद्यपि रिंग्स र केङ्ग्सको माध्यमबाट विषाक्तताको अभ्यास लामो समयको कुरा भएको छ, यो चिन्ह एक जना व्यक्तिबाट अर्को पीढीबाट निस्कन्छ, यसको उद्भवको मूल कारण रहस्यमय हुन्छ र "थपन" पृष्ठभूमिको साथ गायब हुन्छ।
किन जगाएको मृत सपना?
के ट्रिनिटीमा कपाल काट्न सम्भव छ?
जुलाई 10 मा साईन
एक मायालु एक सपना के हो?
मृत्युको बारेमा सपना कस्तो छ?
सपना व्याख्या - किन सपना मा जन्म दिने सपना
बीटल्स फ्लोरिडा मा ठूलो मात्रा मा बज - ओमान
मलाई किन चश्मा छ?
किन टाउको दुख्छ?
गर्भको बारेमा तपाई के सपना देख्नुहुन्छ, माछा बाहेक?
Wasps एक घोंसला - एक चिन्ह
पृथ्वीले कस्तो सपना देखाउँछ?
लास किन फरक व्यक्ति छ?
केराटाइटिस - लक्षण र उपचार
स्कीमा कसरी सिक्न?
Valentin Yudashkin - संग्रह 2013
बच्चाको कानमा बोरिक एसिड
पर्दा र वालपेपरमा रंगहरु को संयोजन
स्याउमा दिन अनलोड गर्दै
शुरुआतीका लागि ओरिएंटल नृत्यहरू
महिलाको शरद जैकेट एक हुड संग
गर्भवती ईवा लङ्गोरोले आफ्ना श्रोताहरूलाई आफ्ना बिहान हिड्न थाले
बन्द बिरालो ट्रे
चन्द्रमाहरू प्रोवेंसको शैलीमा
मरीशसबाट ल्याउन के हो?
खुरुचचेभमा हॉलको डिजाइन
कालीन सफा गर्नुहोस्
छोराछोरीमा परिक्रमात्मक सिंड्रोम
नतिजा पोर्टेमले बलात्कारको धम्कीलाई स्वीकार गरे
मनोवैज्ञानिक सुधार को तरिका मा आइसोटेरेपी